Ny lahatsary amin'ny chat ny taona - Ny Lahatsary Amin'ny Chat Meksika
Ny fiarahana amin'ny olona, dia ny zazavavy ao Meksika amin'ny alalan'ny Internet, toy ny maro hafa fanompoana orinasa, efa ela no ao amin ny fiainantsikaAzonao atao ny mandre be dia be ny tantaran'ny fomba ny olom-pantatra tamin'ny alalan'ny Aterineto dia nanampy mba hahita vady fanahy ho avy ny mamorona ny fianakaviana matanjaka, saingy misy fironana hafa izany. Amin'ny ny antontan'isa ny tahan'ny fisaraham-panambadiana dia mihoatra noho izany, ny fanambadiana naharitra herintaona latsaka. Ny anjara asa manan-danja dia nilalao ny mifanentana ny mpiara-miasa. Mampiaraka toerana ao Meksika ny Antsasaky dia hanampy mba hahitana ny tena vady, izay ny fifandraisana dia hanana ny tena tsara. Ny vohikala dia mampiseho ny fifanarahana ampy ho an'ny olona tsirairay Aminareo, ary amin izany ny fametrahana an-tserasera ny Fiarahana ho an'ny fanambadiana ao Meksika ny sehatra vaovao, sy ny asa rehetra ao amin'ny tranonkala dia omena maimaim-poana. Dia sarotra ny mahita ny olona iray izay mety ho efa sambatra izahay. Mazava ho azy, dia afaka milaza na inona na inona, indrindra fa raha olona tsy tapaka ny mangataka aminareo ny momba an ny fiainanao manokana. Raha toa Ianao ka monk na ny mpitoka-monina irery, manirery tokony mihinjitra. Ary izany fanapahan-kevitra izany dia ny marina ny iray. Mba hiatrehana ny olana manirery ao ny ankehitriny ny toe-piainana ny fiainana mora kokoa noho ny teo aloha, nefa, etsy ankilany, ny mifanohitra amin'izany, mafy kokoa. Araka ny efa fantatrareo, ny raibe sy renibe, ary ny ray aman-dreny, tsy andro rehetra eo anoloan'ny FAHITALAVITRA na hanara-maso. Izy ireo no nikarakara fetiben'ny, mahazo-togethers, ny fitsangatsanganana any amin'ny teatra. Nisy maro ny fomba hitsena ny soulmate. Ny taranaka ankehitriny amin'ny heviny ity dia tsy mora. Maro ny mponina sy ny mpiara-monina no efa tsy hita ao amin'ny olona.
Mila manatsara ny toe-draharaha
Na aiza na aiza haleha, sy ny zo ny mpangataka tsy misy. Tianao, hoe, mandeha ny club Ny iray dia liana, ny orinasa dia tsy. Raha amin'ny orinasa lehibe sy ny tabataba, koa tsy dia be mitranga mba hahita ny fanahiny vady. Fa misy ny Internet Izany no mahery sy lehibe, fantatry ny maro, raha tsy ny zava-drehetra. Saika ao anatin'ny minitra vitsy dia afaka mahita ny ilaina ho anao maimaim-poana ny Mampiaraka toerana ao Meksika. Maka minitra vitsivitsy, ary ianareo dia efa nisoratra anarana toy ny mpampiasa vaovao. Nivoaka ny varavarankely amin'ny maro ny fanontaniana. Ny olona iray dia efa nanoratra ny tiako fifandraisana lehibe, ny hafa tanjona dia ny fanambadiana ary ny ankizy, ny hafa te-hahita ny olona amin'ny tombontsoa iombonana, ary ny olona mampiasa ireo tolotra ho an'ny fialam-boly. Maro ny fanontaniana voalaza izay ny mpampiasa te-hahita eo ny Mampiaraka toerana. Misy ireo olona izay mety ho taona, olo-malaza, miatrika endrika, ny volo, ny lokony, ny endriny sy ny hafa masontsivana. Nahazo nahalala maro ny fanontaniana fantatra ny olona rehetra, ary afaka manomboka ny resaka. Ny olona sasany toy ny ela taratasy. Noho izany, ny akaiky kokoa ny olona dia fantatra fa ho avy ny fivoriana. Ny hafa mandeha ny andro manaraka. Misy olona mila mandalo amin'ny kafa sehatra avy ao amin'ny virtoaly taratasy ny tena Mampiaraka - chat an-telefaonina. Tsy misy ilaina ny nofy momba ny mahomby fikarohana ny tapany faharoa miaraka amin'ny fanampian'ny ny Mampiaraka asa.
Na aiza na aiza, momba ny Mampiaraka toerana ao Meksika anisan'izany be dia be ny fisolokiana.
Mety ho marina ny milaza fa misy mihoatra ny azy ireo noho ny any amin'ny toerana hafa. Na izany aza, izany dia tsy misy antony tokony handao ity hevitra ity. Amin'ity tranga ity, dia afaka mahazo traikefa amin'ny olona isan-karazany.
Tsara vintana ianao, dia ho hitanao eto ireo akaiky ny olona.
Mety tsy ho fanohanana ny zava-drehetra, ary ho namana tsara. Sy ny toe-javatra toy izany matetika. Maro ny lehilahy sy ny vehivavy nahita ny fitiavana eto. Izy ireo miara-miaina nandritra ny taona maro, tafiditra ao ny fanabeazana ny zanany. Na inona na inona dia zavatra tsy hainy. Matetika ny fikarohana ho an'ny olon-tiana iray dia tokony handany fotoana be dia be. Izany dia tsy misy tahotra sy ny tsy fahombiazana. Fa raha hitanao fa iray, dia avy hatrany dia hahatakatra fa ny rehetra dia tsy foana. Afa-tsy izany ny tena zava-dehibe, izay rehetra asa ho an'ny Fiarahana antsika maimaim-poana tanteraka.
I meksika ny Meksikana Raharaham-barotra-ny fahalalam-pomba, ny zava-Dehibe Indrindra, ny ao amin'ny Cross Cultural Fifandraisana, ary Geert Hofstede Fanadihadiana
Mba hanao izany fifandraisana mpanelanelana no ampiasaina
Mexico iray ny United States' tena manan-danja ara-barotra mpiara-miasaIo no fahatelo lehibe indrindra amin'ireo mpanondrana any Etazonia, sy ny varotra iraisam-pirenena ny vokatra ahitana menaka fanondranana, ny fizahan-tany, ary ny vokatra ny maro amin'ny antenimiera ny zava-maniry (antsoina hoe maquiladoras). Ny ankamaroan ny asa manan-kery ihany no miasa eo amin'ny sehatry ny fambolena. Ny iray dia tsy maintsy mahafantatra ny olona iray vao manao raharaham-barotra amin'ny azy, ary ny hany fomba mahalala olona ao Meksika dia ny mahafantatra ny fianakaviana. Fifandraisana manokana ny fanalahidin ny raharaham-barotra fahombiazana. Izany no zava-dehibe, indrindra fa ho an'ny manamboninahitra ambony ao amin'ny fivoriana, mba hampiasa ny olona iray izay dia fantatry ny Meksikana mpandraharaha na vehivavy ianao fivoriana. Izany dia ny 'raharaham-barotra fianakaviana' ny fifandraisana, ny olona iray izay hampiditra anao. Io olona io no tetezana izay manorina fahatokiana izay ilaina mba hanao raharaham-barotra ao Meksika. Ireo nanaraka an'i manana toe-tsaina, sy ny tsy manaiky ny fotoana-dia-bola toe-tsaina ny maro hafa kolontsaina. Ny teny Meksikana milaza dia ny hoe 'Avaratra ny Amerikana no miaina ny asa, fa ny Meksikana-miasa mba ho velona. Ny fanajana ny dikany ny fotoana sy ny fomba amam-panao. Raha ny fironana voajanahary dia hiteny haingana dia haingana na dia manana mahery na maranitra feo ny feonao, lasa mahafantatra ny fomba ianao dia avy manerana. Lasa mora mahatsapa ny hafainganam-pandeha sy ny fiteny ampiasaina ao Meksika. Raha tsy izany dia hanimba ny fifandraisana amin'ny caustic fihetseham-po sy ny fitondran-tena. Koa, izany dia tsy lazaina fa vazivazy momba ny 'Montezuma ny valifaty' dia tsy mendrika. Ny olona tokony hanao mpandala ny nentin-drazana maizina palitao sy kravaty.
Ny meksikana dia mafana ary mamindra fo
Ny fitafiana dia tokony ahitana ny fitoriana atao fa efa mahazatra andalana sy tailoring amin'ny fotsy na tafika an-dranomasina, sy fotsy na ho manga mazava shirts.
Lobaka fotsy kokoa ny ara-dalàna ary tokony ho tonta, raha ny mba fombafomba ny fivoriana tononiny.
Ny vehivavy dia tokony manao akanjo na zipo sy blouse. Ny fitoriana mahazatra, mety ihany koa ho tonta. Manaova fitafiana mampiasa mahazatra andalana, mahazatra zipo halavan'ny, sy ny fototra mahazatra loko volondavenona, ny tafika an-dranomasina, fotsy, ary côte d'ivoire. Ny olona dia mety manao pataloha sy fahazavana shirt ho tsotsotra. Drafitra ny kisendrasendra fitafiana mampiasa ny mahazatra loko, miampy ny rameva, ary dia ho tsotsotra, nefa voalambolambo. Tokony manana ny fahafahana manao guayabera, ny mahafinaritra nentim-paharazana maivana shirt, tsy manao dia avy eo ny pataloha. Famolavolana izany dia tena ahazoana aina amin'ny mafana ny andro.
Ny vehivavy dia mety manao palitao miaraka amin'ny pataloha na zipo ho tsotsotra.
Manolotra ny tenanao ho toy professional mahafinaritra sady hendry, na amin'ny tsy ara-dalàna mametraka, manorina ny tsotsotra fitafiana mampiasa mahazatra loko fotsy, manga, rameva, fotsy sy côte d'ivoire. Mijoro amin'ny tanana eo amin'ny andilany-kevitra masiaka sy ny fitandremana ny tanana ao amin'ny paosy dia impolite. Ny olona hifandray tanana teo amin ny fivoriana, ary niala ka dia miandry ny vehivavy mba ho ny voalohany hanolotra ny tanany. Ny vehivavy dia mety hifandray tanana ny lehilahy sy ny vehivavy hafa. Imbetsaka, ny vehivavy dia mety pat ny vehivavy iray hafa ny sorony na forearm, na manoroka ny takolany. Potoana dia tsy henjana noho ny fifantohany amin'ny adidy.
Ny fotoana tsara indrindra ny fotoana dia eo: a.
m, amin'ny faramparan'ny tolakandro ny safidy faharoa. Raharaham-barotra sakafo, fa noho ny fiaraha-misakafo dia ny nentim-paharazana ny endriky ny raharaham-barotra voly ary matetika maharitra ny raharaha, am-piandohana eo: ka: p. ary maharitra telo na efatra ora, amin'ny fotoana kely ho natokana ho tena raharaham-barotra. Ny sakafo dia ampahany manan-danja ny raharaham-barotra mba hanorina fifandraisana manokana. Miasa breakfasts ihany koa malaza, fihaonana tao: na: ao amin'ny trano fandraisam-bahiny, ary matetika maharitra adiny roa ao amin'ny tena. Meksikana ny olona dia mafana sy ny namana ary ho be dia be ny fifandraisana ara-batana. Matetika izy ireo mikasika ny sorony na mihazona ny iray hafa ny sandriny. Mba hiala mikasika izany dia heverina ho toy ny faniratsirana. Manome fanomezana ho mpanao raharaham-barotra dia tsy ilaina. Zavatra kely amin'ny orinasa famantarana (ho an'ny voalohany mitsidika) dia ankasitrahana.
Mpitan-tsoratra no mankasitraka ny fanomezam-pahasoavana.
Raha manome fanomezana sarobidy, toy ny ditin-kazo manitra, na ny fehin, manolotra izany amin'ny fiverenana mitsidika.
Lehilahy manome izany mba ny vehivavy ny sekretera tokony milaza ny fanomezam-pahasoavana dia avy ny vadiny.
Ny fanomezam-pahasoavana dia tsy takiana ho an'ny sakafo hariva vahiny fa dia ho nankasitrahany. Safidy tsara no vatomamy, voninkazo (nalefa mialoha ny fotoana), na ny asa-tanana eo an-toerana any an-trano. Ny vehivavy dia tsy tokony asao ny lehilahy mifanitsy noho ny raharaham-barotra sakafo hariva raha tsy hoe angaha hafa mpiara-miasa, na vady any am-piangonana. Koa, Meksikana-katsaram-panahy ny olona dia miezaka mba handoavana ny sakafo, na mampiantrano izany. Fomba matihanina mba hampiantrano ny sakafo dia ny hisakafo na sakafo atoandro tao an-trano fandraisam-bahiny. Mialoha ny handamina ny sakafo koa ny trano fandraisam-bahiny volavolan-dalàna. Nanaitra dia mety ho asa nomen'ny. Ny karama dia matetika ambany fa ny mpiasa dia miankina betsaka amin'ny gratuities noho ny fidiram-bola. Ny anaram-boninahitra dia zava-dehibe ary tokony ho tafiditra eo amin'ny raharaham-barotra karatra. Mety mivantana miteny ny olona iray amin'ny alalan'ny ihany no mampiasa ny na ny anaram-boninahitra ihany, tsy ao anatin'izany ny anarana farany. Dokotera dia ny dokotera na ny fianarana nahazoany diploma Ph. Mpampianatra izany ny anaram-boninahitra ho an'ny mpampianatra. Fomba mahavariana dia injeniera. Aquatec dia ny mpanao mari-trano. Abogado dia mpahay lalàna. Ny olona tsy matihanina anaram-boninahitra dia miantefa amin'ny fampiasana Mr, Ramatoa, na ny Malahelo sy ny na ny fanampin'anarany. Señor dia Mr, Senora no an-Dramatoa, ary Senorita dia Malahelo Hispanika amin'ny ankapobeny, mampiasa roa fanampin'anarana. Ny voalohany atao hoe voatanisa avy amin'ny ray, ary ny faharoa atao hoe voatanisa dia avy amin'ny reny. Rehefa miresaka misy olona mampiasa ny na ny ray ny fanampin'anarany.
Iray manambady vehivavy iray dia manampy ny vadiny, ny ray ny anarany ny fiafaran ny anarany, matetika hita amin'ny maha-de (anarana) rehefa voasoratra.
Io vehivavy io dia niteny amin'ny fomba ofisialy ny maha-Senora de (anarana).
Ny Mampiaraka toeranaDiaManolotra Anareo zavatra iray-ny fomba malaza indrindra ny Mampiaraka ao amin'ny Internet - ny fifandraisana Ny olona hihaona amin i Brezila.
Tovovavy iray mitady bandy V. Zazavavy mitady olon-tiany
결혼하는 방법 브라질에서부터 자신을 보호하기 위해 실망
sary mampiaraka ny vehivavy tokan-tena maniry ny hihaona aminao mampiaraka toerana olom-pantatra eny an-dalambe video Fiarahana ho maimaim-poana tsy misy fisoratana anarana amin'ny sary videos mametra ny lahatsary amin'ny chat miaraka amin'ny ankizivavy velona stream lehilahy ny fomba hitsena ny tovovavy video chats amin'ny zazavavy ny lahatsary amin'ny chat tsy misy fisoratana anarana